42 ka mid ah gavanarada dalka oo maalinta dimuqaradinimda dalka ballad sharaf la gudoonsiinayo – The Voice of Northeastern Kenya
42 ka mid ah gavanarada dalka oo maalinta dimuqaradinimda dalka ballad sharaf la gudoonsiinayo
Star FM December 5, 2016
Golaha ay ku bahobeen gavanarada dalka ee loo soo gaabiyo COG ayaa 42 ka mid ah gavanarada u soo magacaabay in maalinta la xusayo dimuqaradinimada dalka ee loo yaqaano jamhuri day ay dowlada ku aqoonsato sida ay wadanka ugu adeegen.
Malinta dimuqaradinimada dalka ayaa la xusaa 12-ka bisha Didembar sanad kasta waxaana lagu maamuusa taarikhda marka ay ahayd 12-ka bisha Disembar ee sanadii 1964 –tii oo ay Kenya si buuxda u noqotay dal dimuqaradi ah oo ismaamul ka jiro.
Waxaa gavanaradan la siinaya ballad lagu magacaabo EGH oo la xiriirta hogaankan waxaayna ka turjmeysa kaalinta ay ka qateen horumarka dalka inta ay gavanara ahayeen ama ka hor inta anan jagadan loo dooranin.
Gavanaha countiga Kiambu William Kabogo ayaa la soo jeediyay in balladan la siiyo maadama uu qaab dijitaal ah ka dhigay canshuur arrurinta.
Sido kale gavanaha countiga Nyeri Nderitu Gachagua ayaa lagu aqoonsanayaa hogaanka wanaagsan oo uu maamul goboleedka ugu horseeday dhanka beeraha, waxbarshada iyo kaabayaasha wadooyinka.
Xassan Cali Joho oo ah gavanaha Mombasa ayaa sido kale liiskan ku jiro maadama sida la sheegay uu wanaajiyay howlaha caafimad ee countigiisa iyo sido kale maareynta ciriiriga dhanka gawaarida.
← Gavanaha countiga Tana River oo golihiisa wasiirada isku shandheyn ku sameyay
Dhageysiga dacwad ka dhan ah taliyihii ciidanka LRA oo berito maxkamada ICC ka billabanayo →